Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ > ကျွန်မတို့ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် > သားဆက်ခြားသောက်ဆေး
သားဆက်ခြားဆေးရဲ့  ကျန်းမာရေး နဲ့ဆိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာလဲ
သားဆက်ခြားဆေးတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပြီးတစ်ခါတရံမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သွေးဆင်းခြင်းဓမ္မတာဆိုင်ရာကြွက်တက်ခြင်းများ၊ဝက်ခြံပေါက်ခြင်း၊ဓမ္မတာအကြို ရောဂါပြလက္ခဏာစ၊ုနေရာလွဲမှား သားအိမ်တစ်သျှူးများနဲ့အရည်ကြည် အိတ်များတည်သည့်သားဥအိတ်ရောဂါပြလက္ခဏာစုတွေအတွက်သောက်သုံးရန်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။သားဆက်ခြားဆေးများသည် အမျိုးသမီး၄၀%ကြုံ တွေ့ရတဲ့ အလွန်အမင်းနာကျင်ကိုက်ခဲသည့်ဓမ္မတာသွေးဆင်းခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ဟော်မုန်းဓာတ်ပါသောသန္ဓေတားဆေးသည်သွေးအား နည်းရောဂါဖြစ်ပွားစေသောဓမ္မတာသွေးရက်ရှည်လွန်ကဲစွာဆင်းခြင်းကိုကုသရာမှာအသုံးဝင်ပြီးဝက်ခြံပေါက်ခြင်း၊အမွေးအမှင်များလာခြင်းကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်စွမ်းရှိပါ တယ်။ တခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေထဲမှာ ဓမ္မတာသွေးဆင်းခြင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးပြီး သားအိမ်အလုံး အကျိတ်များ ကြောင့်ဖြစ်သော သွေးဆင်းခြင်းနှင့်နေရာလွဲမှား သားအိမ်တစ်သျှူးများ နှင့်အတူတင်ပါးဆုံပိုင်းနာကျင်ခြင်းများကိုကုသရာမှာလည်းပါဝင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ပုံမှန်မဟုတ်သည့်ဓမ္မတာသွေးဆင်းခြင်းများကို ပုံမှန်ဖြစ်စေပြီးဓမ္မတာသွေးဆင်းခြင်းရဲ့  ဖိနှိပ်မှုများကိုပုံမှန်ဖြစ်စေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပါဝင်ပါတယ်။တချို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်သူတို့ရာသီဓမ္မတာခွင် လာမယ့်အချိန်ကိုကြို တင်ခန့်မှန်းတာမျိုး ရှောင်တာမျိုးတွေ အတွက်အဆင်ပြေစရာကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အချို့တွေအတွက်ကတော့ဓမ္မတာသွေးပုံမှန်ဆင်းခြင်းသည်ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါနဲ့ဓမ္မတာသွေးဆင်းခြင်းရဲ့ အခြားဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အံသြစရာတခုကတော့တားဆေးဖြတ်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာကိုယ်ဝန်မဆောင်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို့သူတွေကတော့တားဆေးသောက်ခြင်းကသားသမီးမရနိုင်ခြင်း(မြုံ ခြင်း)ကိုမဖြစ်စေဘူးလို့အခိုင်အမာပြောဆိုကြတယ်။အမျိုးသမီးအများစုကတော့ တားဆေးအပါအဝင်သားဆက်ခြားသန္ဓေတားနည်းကိုသုံးတဲ့အမျိုးသမီးအများစုမှာသူတို့ဆန္ဒရှိတဲ့နောင်အခါမှာကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။ (http://www.sexualityandu.ca/birth-control/birth_control_methods_contraception/hormonal-methods)
ဟော်မုန်းပါဆေးကသင့်ရာသီဓမ္မတာခွင်အတွက်ဟော်မုန်းပါဝင်တဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းမပါဝင်တဲ့ ဆေးတွေက သားဆက်ခြား ဆေးရဲ့ တစိတ်တပိုင်း တွေဖြစ်တယ်။၂၁ရက်ဆေးကတ်မှာဆေးအားလုံးဟာဟော်မုန်းပါဝင်ဆေးတွေသာ ဖြစ်ပြီး၂၈ရက်ဆေးကတ်မှာတော့ဆေးလုံး၂၁လုံးကဟော်မုန်းပါဝင်ဆေးဖြစ်ပေမယ့် ကျန်တဲ့ဆေး ၇လုံး ကသံဓာတ်အားဖြည့်ဆေးလုံးတွေမို့ ဟော်မုန်းမ
(၂၁)လုံးပါဆေးထုပ်နဲ့ (၂၈)လုံးပါဆေးထုပ် နှစ်မျိုးက ဘာများကွာခြားပါသလဲ။
(၂၁)လုံးပါဆေးထုပ်နဲ့ (၂၈)လုံးပါဆေးထုပ်(၂)မျိုးရဲ့ အဓိကခြားနားချက်က (၂၁)လုံးပါဆေးထုပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ဆေးလုံးတိုင်းမှာ မျိုးအောင်ခြင်းကို တားဆီးပေးတဲ့ estrogen နဲ့ progestin ဟော်မုန်း(၂)မျိုး ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီး (၂၈)လုံးပါတဲ့ဆေးထုပ်ထဲက ပထမ(၂၁)လုံးမှာ ဟော်မုန်းတွေပါဝင်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂၈)လုံးပါဆေးထုပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ နောက်(၇)လုံးကတော့ spacer လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းမပါဝင်တဲ့ ဆေးတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဒီဆေး(၇)လုံးမှာ သံဓါတ်ဖြည့်စွက်ပေးတဲ့ဓါတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။(http://www.birth-control-comparison.info/the-pill)
ဒီဆေးတွေကို ရေရှည်ဆွဲသောက်လို့ ဖြစ်ပါသလား။
ရေရှည်ဆွဲသောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးနေ့တိုင်းသောက်ရတာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ သားဆက်ခြားသောက်ဆေးတွေကို သင်သုံးချင်တဲ့အချိန်ထိ ဆွဲသောက်လို့ ရပါတယ်။
သားဆက်ခြားဆေးသောက်တာကို ရပ်လိုက်ရင် ကိုယ်ဝန်ပြန်ရဖို့ ဘယ်လောက်ကြာတတ်ပါသလဲ။
ဆေးသောက်တာ ရပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ရာသီသွေးပြန်ဆင်းဖို့ အချိန်နည်းနည်းကြာတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုကတော့ ဆေးသောက်တာရပ်လိုက်ပြီး (၂)ပတ်ကနေ (၄)ပတ်အတွင်းမှာ ရာသီသွေးပြန်ဆင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သင့်ပေါ်မှာနဲ့ သင့်ရာသီစက်ဝန်းက ပုံမှန်ဘယ်လိုလာတတ်သလဲဆိုတာပေါ်ကိုလည်း မူတည်ပါတယ်။ဆေးသောက်တာကိုရပ်လိုက်တဲ့အခါ သင့်ဓမ္မတာလာချိန်က မူမမှန်ဖြစ်တတ်ပြီး သင့်ဓမ္မတာလာချိန် သူ့ဘာသာသူပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားဖို့ သုံးလလောက်အထိကြာတတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီဆေးတွေမှာ လတိုင်းလတိုင်း သားဥထုတ်လွှတ်ခြင်း (သားဥထုတ်လွှတ်မှု) ကို ရပ်တန့်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေပါဝင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးသောက်တာရပ်လိုက်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ရာသီစက်ဝန်းကို “ထုတ်ပစ်ပြီးနောက် သွေးဆင်းခြင်း” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ပစ်ပြီးနောက် သွေးဆင်းခြင်းပြီး နောက်ရာသီစက်ဝန်းကတော့ သင့်ရဲ့ပထမဆုံး သဘာဝအတိုင်းဆင်းတဲ့ ရာသီစက်ဝန်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးသောက်တာရပ်လိုက်ပြီးပြီးချင်းချက်ချင်းဘဲ ကိုယ်ဝန်ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးသောက်တာရပ်လိုက်ပြီးပြီးချင်း ချက်ချင်းဘဲ ကွန်ဒုံးလိုမျိုး တခြားသားဆက်ခြားနည်းကို အသုံးပြုဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ကိုယ်ဝန်ရဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး သဘာဝအတိုင်းရာသီဆင်းတဲ့အချိန်ကို စောင့်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေ အကောင်းဆုံးမှာရှိနေစေဖို့ အချိန်ရမှဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် – folic acid ဖြည့်စွက်ဆေးသောက်တာ၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တာ၊ အရက်ဖြတ်လိုက်တာတွေလိုမျိုး အရာတွေ။ ဒါမှသာ OG (သို့) ၀မ်းဆွဲသည်က သင့်မွေးရက်ကို ပိုတိတိကျကျ ခန့်မှန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။(http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/when-periods-after-stopping-pill.aspx)
တကယ်ဆို ဒီသားဆက်ခြားသောက်ဆေးတွေက သားဥအိမ်နဲ့ သားအိမ်နံရံမှာ ကင်ဆာဖြစ်တာတွေကိုတောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဆေးသောက်တာကို ရပ်လိုက်ပြီး ၁၅နှစ်လောက် ကြာတဲ့အထိတောင် ဒီကာကွယ်ပေးမှုက ဆက်ကျန်နေပါသေးတယ်။
ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဒီဆေးသောက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုပြီးအတွေ့ရများတယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် တိတိကျကျ သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာပါ။ ဒီရောဂါက Human papilloma virus (HPV) လို့ ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ဒီပိုးကူးစက်ခံရပြီး နှစ်တွေ ကြာလာတဲ့အခါမှာ ကင်ဆာအဖြစ်ကို ကူးပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီသားဆက်ခြားသောက်ဆေးကို ၅နှစ်နဲ့အထက် အသုံးပြုနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ အဲဒီလို ကင်ဆာအဖြစ်ကို ကူးပြောင်းမှုဟာ ပိုပြီးမြန်ဆန်တတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆေးသောက်ရင်းနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ အင်မတန်ရှားပါးလှပါတယ်။
နောက်ပြီး သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဟာ ကာကွယ်လို့ရတဲ့ ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးအများကြီးမွေးခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံဖက်များခြင်းလို အန္တရာယ်များတဲ့ အပြုအမူတွေ ရှောင်မယ်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်၊ ကင်ဆာအကြိုအဆင့်ကို သိနိုင်ဖုို့ လုပ်ရတဲ့ စစ်ဆေးမှုကို (၅)နှစ်တစ်ခါ လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် ဒီရောဂါအတွက် စိတ်ပူနေစရာ မလိုပါဘူး။
Source : WHO guidelines for Family Planning
နေ့စဉ်သောက်ရတဲ့ သားဆက်ခြားသောက်ဆေးတွေက သွေးပိတ်ဆို့မှုကို ဖြစ်စေပါသလား?
သားဆက်ခြားသောက်ဆေးတွေက သွေးခဲမှုကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတာ မဟုတ်ပေမယ့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ သွေးခဲမှုဖြစ်နိုင်ချေကိုတော့ ၃ဆကနေ ၄ဆအထိ တိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီိလိုဖြစ်ရတာက ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးပါ သန္ဓေတားဆေးတွေမှာ ပါတဲ့ အီစထရိုဂျင်နဲ့ ပရိုဂျက်စတင် ဟော်မုန်းတွေရဲ့ အာနိသင်ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ အဲဒီအပြင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခံပြီးစမှာ လှုပ်ရှားမှုအလွန်နည်းခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်းနဲ့ တချို့သော မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကလည်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ သွေးခဲမှုဖြစ်နိုင်ချေကို များစေပါတယ်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် သားဆက်ခြားသောက်ဆေး အသုံးပြုတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ သွေးခဲမှုဖြစ်နိုင်ချေက အလွန်နည်းပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ဒီဆေးသောက်သုံးတဲ့ အမျိုးသမီးအယောက် ၁,ဝဝဝ မှာ ၁ယောက် (ဝ.၁%) သာ သွေးခဲမှု ဖြစ်ပွားပါတယ်။ သွေးကြောပိတ်ရောဂါ ဖြစ်ဖူးတဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင်တော့ အန္တရာယ်ပေးနိုင်ချေက ဒီထက်ပိုများပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်မှာ သွေးကြောပိတ်ရောဂါ ရှိနေရင်၊ ရှိခဲ့ဖူးရင်တော့ ဒီလိုဟော်မုန်းပါဝင်တဲ့ သန္ဓေတားနည်းတွေ အသုံးပြုလို့ရမရကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဆေးလုံး၂လုံး ကို တစ်နေ့တည်းမှာပဲ သောက်ရင်ဘေးကင်းစိတ်ချရလား?
သင်ဟာ မထင်မှတ်ဘဲ တားဆေးကို၁လုံးထက်ပိုပြီး သောက်မိရင်ဆေးပညာ အကြံပေးချက်တွေရှာဖွေစရာမလိုဘဲဘာလက္ခဏာမှလည်းမရှိပါဘူး။၁လုံးထက်ပိုပြီးသောက်မိရင်တစ်ရက်စီနဂိုသောက်နေကျအတိုင်းကျန်တဲ့ဆေးတွေကိုဆက်သောက်သင့်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်သင်ကနေ့တိုင်းမနက်၈နာရီမှာဆေးသောက်နေကျဆိုရင်
-တနင်္လာနေ့မနက်၈နာရီမှာပုံမှန်အတိုင်း ဆေးသောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ မတော်တဆ မနက်၈နာရီ၁၅မှာနောက်ထပ်တစ်လုံးသောက်မိပြန်တယ်။
-သင်နောက်ထပ်ဆေးတွေကို အင်္ဂါနေ့မနက်၈နာရီမှာပုံမှန်အတိုင်း ဆေးကိုသောက်သင့်ပါတယ်။
သတိထားရမှာကသင့်ရဲ့ ဆေးကတ်ပေါ်မှာရက်သတ္တပတ်ရဲ့ ရက်တွေရေးထားတာရှိနေမယ်ဆိုရင် သင်တစ်နေ့ကိုဆေး၂လုံးသောက်မိသော် ရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မယ်။ဆေးနဲ့ရက်မကိုက်ညီတာကိုမှတ်ထားရမယ်။(http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/taken-extra-pill-by-accident.aspx)
သင့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့အဆင်ပြေသင့်လျော်တဲ့သန္ဓေတားနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခြင်းကအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက်အဆင်ပြေတဲ့သန္ဓေတားနည်းကတခြားအမျိုးသမီးအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ သန္ဓေတားနည်းမဖြစ်လောက်ပါဘူး။သင့်မှာ အဖော်တစ်ယောက်သို့မဟုတ်အဖော်အများကြီးရှိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟော်မုန်းနဲ့ဓမ္မတာသွေးဆင်းမှုပြောင်းလဲတာကိုဂရုစိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်သင်ရွေးချယ်အသုံးပြုတဲ့သန္ဓေတားနည်းလမ်းပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။
သားဆက်ခြားသန္ဓေတားခြင်းရဲ့ မတူညီတဲ့ပုံသေနည်းတွေမှာ မတူညီတဲ့အကောင်းအဆိုးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။၀က်ခြံပြဿနာ ၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာမယ့် ပြဿနာ နဲ့ နို့တိုက်မိခင်နဲ့ သင့်လျော်ပါ့မလား ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြစ်လာနိုင်တာတွေ ပေါ်မူတည်ပြီး တီထွင်ထားတဲ့ နည်းပညာတွေက ကူညီပေးမှာပါ။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ဖို့သားဆက်ခြားနည်းတွေဆင်းသက်လာကြတယ်။ (http://www.acog.org/About-ACOG/News-Room/News-Releases/2009/Hormonal-Contraceptives-Offer-Benefits-Beyond-Pregnancy-Prevention)
သန္ဓေတားဆေးတွေက ကိုယ်ဝန်ရှိမလာအောင် နည်းပေါင်းစုံနဲ့ တားဆီးပေးပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ သားဥထုတ်လုပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေတဲ့နည်းနဲ့ တားဆီးပေးတာပါ။ သားဥလုံးဝထွက်ရှိမလာဘူးဆိုရင် သုတ်ကောင်နဲ့ မျိုးပွားဖို့လဲ ရှိလာမှာမဟုတ်တဲ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေလဲ ကိုယ်ဝန်ရှိမလာနိုင်တော့ပါဘူး။ သန္ဓေတားဆေးအများစုမှာ estrogen နဲ့ progestin လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းအမဓာတ်(၂)မျိုး ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပုံစံတွေပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပေါင်းစပ်ပုံစံတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သဘာဝဟော်မုန်းအဆင့်တွေကို တည်ငြိမ်စေပြီး ဓမ္မတာလာချိန်အလယ် (သားဥကြွေချိန်)မှာ estrogen ထွက်ရှိမလာအောင် တားဆီးပေးပါတယ်။ estrogen တိုးမလာရင် ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ pituitary gland က သာမာန်အားဖြင့် သားဥအိမ်က သားဥတွေ ထုတ်လွှတ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ တခြားဟော်မုန်းတွေကို ထုတ်လွှတ်မပေးပါဘူး။သီးခြားအနေနဲ့ ဆေးထဲမှာပါတဲ့ ပေါင်းစပ် estrogenက အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။Pituitary gland ကနေ သားဥထုတ်လုပ်ခြင်းကို တားဆီးပေးတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်လွှတ်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေပါတယ်။ဓမ္မတာလာချိန်အလယ်မှာ သွေးထွက်ခြင်းကိုတားဆီးဖို့ သားအိမ်အနားသတ် (endometrium) တွေက်ု အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ပေါင်းစပ် progestin တွေဟာ အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ Pituitary gland ကနေ သားဥထုတ်လွှတ်မှုကို တားဆီးပေးတဲ့ LH (ဟော်မုန်းတစ်မျိုး) ထုတ်လွှတ်မှုကို ရပ်တန့်စေပါတယ်။သားအိမ်အနားသတ်တွေက မျိုးအောင်တဲ့သားဥတွေကို လက်မခံအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။သုတ်ကောင်တွေရဲ့ သားဥနဲ့ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကို အထိုက်အလျောက်ကန့်သတ်ပေးပါတယ်။သုတ်ကောင်တွေလှုပ်ရှားရ ပိုမိုခက်ခဲအောင်လို့ cervical mucus တွေ ပိုမိုထူထဲအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ဟော်မုန်းသန္ဓေတားဆေး(၂)မျိုး(၂)စားရှိပါတယ်။ (၁) estrogen နဲ့ progestin ပါဝင်တဲ့ ပေါင်းစပ်ဆေးနဲ့ (၂) progestin သာလျှင်ပါဝင်တဲ့ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်းစပ်ဆေးတွေက progestin သာလျှင်ပါတဲ့ဆေးတွေထက် သိသိသာသာပိုမိုအစွမ်းထက်ပြီး ဓမ္မတာလာချိန်ကြားကာလတွေမှာ အဖုအပိမ့်တွေ အထွက်နည်းစေတဲ့ ကောင်းကျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့အမျိုးသမီးတွေက estrogen ကို သည်းမခံနိုင်ဘဲ progestin သာလျှင်ပါတဲ့ဆေးကိုဘဲ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဆေးနှစ်မျိုးစလုံးကို အမှတ်တံဆိပ်မျိုးစုံနဲ့ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး တစ်ခုဆီမှာ ဟော်မုန်းရောစပ်မှုတွေကတော့ အနည်းငယ်ကွာခြားပါတယ်။ (http://ec.princeton.edu/questions/ecabt.html)
ရပါတယ်။ အလွယ်ကူဆုံးကတော့ လက်ရှိသောက်နေတဲ့ ဆေးထုပ်ကို အချိန်ဇယားအတိုင်းသောက်နေရာကနေ ရပ်လိုက်ပြီး နောက်အထုပ်သစ်ကို သင်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှ ပြန်စသောက်လို့ရပြီး ဘယ်လိုအရန်အကာအကွယ်နည်းကိုမှ အသုံးပြုဖို့မလိုပါဘူး။နောက်အထုပ်သစ်ကိုသောက်ဖို့ မစောင့်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဆေးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးသောက်သုံးတဲ့အချိန်ဟာ (၂၄)နာရီထက်မခြားစေပါနဲ့။ ဥပမာနေနဲ့ပြောရရင် မနက်ဆေးသောက်ချိန်ကို နေ့လည်ဆေးသောက်ချိန်မှာ ပြောင်းသောက်ချင်တယ်ဆိုရင် သောက်နေကျအချိန်မှာတစ်ကြိမ်၊ အချိန်အသစ်မှာတစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ရက်အတွင်းမှာ ဆေး(၂)လုံးသောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာ (၃၆)နာရီကြာ စောင့်နေတာထက်စာရင်၊ အကာအကွယ်အရန်နည်းလမ်းသုံးပြီး တစ်ပတ်ကြာစိတ်ပူနေတာထက်စာရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ကိစ္စကတော့ သင်သောက်မယ့်ဆေးထုပ်ကို ကြားရက်တွေမှာသောက်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင် သင့်ဆေးထုပ်တွေကို ရက်အလိုက် ပြန်သတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သောက်ရမယ့်ဆေးကို အင်္ဂါနေ့ညမှာသောက်မိပြီး ကျန်တဲ့ဆေးထုပ်တွေကို ပြောင်းဖို့မေ့သွားခဲ့ရင် ရှုပ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ (http://bedsider.org/questions/153-what-if-i-want-to-start-taking-my-pill-at-a-different-time?tag=the_pill)
သန္ဓေတားဆေးဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်ရှိမလာအောင် တားဆီးဖို့ နေ့စဉ်သောက်နိုင်တဲ့ဆေးဝါးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေကို တစ်ခါတစ်ရံမှာ “ဆေးလုံး” (သို့) သားဆက်ခြားဆေး (OCP)လို့ ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ (https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/birth-control-pill
အချိန်ဇုန်ပြောင်းလဲသွားရင်ရော ဘယ်အချိန်မှာ ဆေးသောက်ရပါမလဲ။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ သင့်နေရပ်မြေရဲ့အချိန်ဇုန်မှာ ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကို စဉ်းစားနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး အဲ့ဒီ့အချိန်မှာ ဆေးသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်တော့ သင်က ရန်ကုန်မှာနေပြီး ရန်ကုန်ထက်(၁.၅)နာရီပိုစောတဲ့ စင်္ကာပူကို ခရီးထွက်တယ်ဆိုရင် ဆေးကို သင်သောက်နေကျပုံမှန်အချိန်ထက် (၁.၅)နာရီနောက်ကျပြီး သောက်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ရန်ကုန်မှာ ဆေးကို မနက်(၉)နာ၇ီသောက်တယ်ဆိုရင် စင်ကာပူမှာ မနက်(၁၀)နာရီခွဲအချိန် သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ပိုလွယ်တယ်ဆိုရင် (ဥပမာ – သင်ပုံမှန်ဆေးသောက်တဲ့အချိန်က သင်အလည်အပတ်သွားတဲ့ဆီမှာ ညလယ်သန်းခေါင်အချိန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်) ဆေးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးသောက်သုံးတဲ့အချိန် (၂၄)နာရီထက်မခြားဘူးဆိုရင် အချိန်ဇယားကို ပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်။ (http://bedsider.org/questions/143-i-m-traveling-to-a-different-time-zone-how-can-i-figure-out-when-to-take-my-pill?tag=the_pill)
ဆေးသောက်ပြီး (၂)နာရီအတွင်း ပြန်အန်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီဆေးကို မသောက်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဆေးအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဆေးထုပ်ထဲက နောက်ဆေးတစ်လုံးကို ချက်ချင်းသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဆေးအမျိုးအစားကို သင်သောက်သုံးသလဲ၊ သင်ဆေးသောက်တာ ဘယ်ရက်ရောက်ပြီလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီး နောက်(၇)ရက်မှာ လုံခြုံစိတ်ချရအောင်လို့ ကွန်ဒုံးလိုမျိုး အရန်အကာအကွယ်နည်းကို သင်သုံးချင်မိနိုင်ပါတယ်။ (http://bedsider.org/questions/304-i-threw-up-right-after-taking-my-pill-now-what?tag=the_pill)
မကြောက်ပါနဲ့။ ဆေးသောက်ဖို့မေ့သွားခဲ့ရင် ပထမဆုံးလုပ်သင့်တာက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေဖို့ပါဘဲ။ ဆေးသောက်ဖို့မေ့သွားခဲ့တာကို သတိရတာနဲ့ချက်ချင်း နောက်ဆေးတစ်လုံးကို သောက်လိုက်ပြီး နောက်(၇)ရက်လုံး အကာအကွယ်အရန်နည်းကို အသုံးပြုပါ။ (တကယ်လို့ အဲ့ဒါက စတုတ္ထမြောက်အပတ်မှာသောက်ရမယ့် placebo/ iron ဆေးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီရက်မှာသောက်ရမယ့် placebo/ iron ဆေးကို ထားလိုက်ပြီး အချိန်ဇယားအတိုင်းဆက်သောက်သွားလို့ ရပါတယ်။နောက်ဆုံး(၅)ရက်အတွင်း အချိန်ဇယားအတိုင်း မသောက်မိဘဲ လိင်ဆက်ဆံမိတယ်ဆိုရင် အရေးပေါ်သားဆက်ခြားဆေးကို သောက်ကောင်းသောက်နိုင်ပါတယ်။ (http://bedsider.org/questions/148-what-should-i-do-if-i-miss-a-pill?tag=the_pill)
ဆေးထဲမှာ ဘယ်လိုဟော်မုန်းတွေ ပါဝင်တာပါလဲ။
သားဆက်ခြားဆေးမှာ ဆက်စပ်သားဆက်ခြားဆေး (COC)နဲ့ progestin သာလျှင်ပါဝင်တဲ့ သားဆက်ခြားဆေးရယ်လို့ (၂)မျိုး(၂)စားရှိပါတယ်။ ဆက်စပ်သားဆက်ခြားဆေးမှာ estrogen နဲ့ progestin လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်း(၂)မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ သားဥအိမ်က သားဥထုတ်လွှတ်မှုကိုတားဆီးပေးခြင်း၊ သုတ်ကောင်တွေ သားဥဆီရောက်ဖို့ ခက်ခဲအောင် cervical mucus ကို ထူထဲစေခြင်းနဲ့ သားအိမ်အနားသတ်တွေ မျိုးအောင်ပြီးသားဥတွေကို လက်မခံအောင် ပြောင်းလဲပေးခြင်း စတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ Progetin သာလျှင်ပါဝင်တဲ့ သားဆက်ခြားဆေးတွေမှာ estrogen မပါဝင်ပါဘူး။ ဒီဆေးတွေဟာလည်း သုတ်ကောင်တွေ သားဥဆီရောက်ဖို့ ခက်ခဲအောင် cervical mucus ကို ထူထဲစေခြင်း၊ မျိုးအောင်မှုဖြစ်ပွားဖို့ ခက်ခဲအောင် သားအိမ်အနားသတ်တွေကို ပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သားဥထုတ်လွှတ်ခြင်းတွေ ရပ်တန့်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ (http://www.sexualityandu.ca/birth-control/birth_control_methods_contraception/hormonal-methods)
ရင်သွေးငယ်ကို နို့တိုက်ကျွေးနေရင် ဆေးဆက်သောက်လို့ ရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဆေးဆက်သောက်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် progestin သာလျှင်ပါဝင်တဲ့ဆေးကတော့ နို့တိုက်ကျွေးနေတဲ့အချိန်မှာသောက်ဖို့ လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။ progestin ပမာဏအနည်းငယ်က နို့ရည်ထဲ ရောက်သွားနိုင်ပေမယ့် သင့်ရင်သွေးငယ်ကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေပါဘူး။ Progestin သာလျှင်ပါဝင်တဲ့ဆေးက နို့ရည်ထွက်ရှိမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ (http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/the-pill-progestogen-only.aspx)
သန္ဓေတားဆေးတွေက လိင်ဆက်ဆံမှုကတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေ (STIs) ကို ကာကွယ်ပေးပါသလား။
မကာကွယ်ပေးပါဘူး။ သန္ဓေတားဆေးတွေက STIs တွေကို မကာကွယ်ပေးပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံမှုကတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေ (STIs) ကို ကာကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက လိင်ဆက်ဆံရင် အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးကို အသုံးပြုတာပါဘဲ။ ကိုယ်ဝန်ရှိမလာကိုရော၊ STIs တွေကိုရော ပူပန်နေပါလျှင် ဆေးသာမက ကွန်ဒုံးပါ အသုံးပြုပြီး နှစ်ထပ်ကာကွယ်တာက ကောင်းမွန်တဲ့ ရွှေးချယ်မှုပါဘဲ။ (http://bedsider.org/questions/191-does-the-pill-protect-against-stis?tag=the_pill)
သောက်လို့ရပါတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေက သူတို့ရဲ့ဓမ္မတာလာချိန်ကျော်သွားအောင်လို့ သားဆက်ခြားတွေ သောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဓမ္မတာလာချိန်ကို တားဆီးဖို့ ဒီဆေးတွေသောက်တာက သင့်ရဲ့မျိုးအောင်နိုင်စွမ်း (သို့) နောက်ပိုင်းမှာ ကလေးရနိုင်စွမ်းကို မထိခိုက်စေပါဘူး။ ဓမ္မတာလာချိန်ကျော်သွားအောင်လို့ အဲ့ဒီဆေးတွေသောက်ချင်တယ်ဆိုရင် အပတ်တိုင်းသောက်ရတဲ့ ဒီဆေးတွေမှာ ဟော်မုန်းရောစပ်မှုတူညီပြီး ဒီဆေးတွေက monophasic ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ သေချာဖို့လိုပါတယ်။ သင်သောက်နေတဲ့ဆေးတွေဟာ Monophasic ဆေးတွေဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြီးရင် ဒီဆေးတွေက်ု ပုံမှန်အတိုင်းသောက်လို့ ရပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က (၂၈)လုံးပါဆေးထုပ်ကို သောက်နေတယ်ဆိုရင် ဆေးသောက်ဖို့မေ့သွားတဲ့အခါ (သို့) သောက်လိုက်တဲ့ဆေးတွေက အကျိုးအာနိသင်မရှိတဲ့အခါ အဲ့ဒီဆေးတွေကို သောက်ဖို့ကျော်လိုက်ပြီး အထုပ်သစ်ကို ချက်ချင်းစသောက်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့(၂၁)လုံးပါဆေးထုပ်ကိုသောက်နေတယ်ဆိုရင် ဆေးမသောက်လို့လည်းဖြစ်တဲ့(၇)ရက်ကို ကျော်လိုက်ပြီး အထုပ်သစ်ကို ချက်ချင်းစသောက်လို့ ရပါတယ်။တကယ်လို့ သင့်ဓမ္မတာလာချိန်ကို ပြန်ရချင်တယ်ဆိုရင် placebo (အကျိုးအာနိသင်မရှိတဲ့) ဆေးတွေကို ပြန်စသောက်လို့ (သို့) ဆေးသောက်နေရတဲ့စက်ဝန်းထဲက မသောက်လည်းဖြစ်တဲ့(၇)ရက်တာကာလမှာ ဆေးပြန်စသောက်လို့ ရပါတယ်။ (http://bedsider.org/features/290-a-quick-guide-to-skipping-periods-with-birth-control)